पाँच लाख माथि शेयर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? सोमबार देखि लागु हुँदै छ अनिवार्य प्यान – Banking Khabar
पाँच लाख माथि शेयर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? सोमबार देखि लागु हुँदै छ अनिवार्य प्यान
बैंकिङ खबर । नयाँ वर्ष २०७६ को शुभारम्भसंगै नेपाली पुंजी बजारमा स्थायी लेखा नंबर अर्थात् प्यान लागु हुनेछ । उक्त प्यान नंबर पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा लगानीकर्ताहरुले अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
फाल्गुन मै धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा सिडीएससीले नेप्सेलाई वैशाख १ गते देखि अनिवार्य प्यान लागु गर्न पत्र काटेको थियो । साथै अनलाइन लग इन युजर्स लिएर कारोबार गरि रहेका लगानीकर्ताहरु जो पाँच लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्दछन् उनिहरुले पनि अनिवार्य प्यान पेश गर्नु पर्ने छ । तर पाँच लाख भन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई प्यान नंबर ऐच्छिक रहेको छ ।
कारोबारका दौरान उल्लेखित रकमको सिमा भन्दा माथि कारोबार गर्ने तर प्यान नंबर उल्लेख नगरे नेप्से प्रणालीले कारोबार प्रक्रिया गर्ने छैन । नेप्से कारोबार प्रणाली अनलाइन गरेसंगै थुप्रै नयाँ फिचरहरु थपिदै गएका छन् । कारोबारलाई प्रबिधि मैत्री बनाउने क्रममा यसलाई व्यवस्थित पनि गरिँदै लग्नु पर्ने भएकोले केहि कारोबार नियमहरुलाई पनि परिमार्जन गर्नु परेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेले यस अघि चैत्र १० गते देखि नै ऐच्छिक रुपमा प्यान नंबर सहितको कारोबार गरेको थियो ।
यस अघि प्यान अनिवार्य गरिने कुरामा धेरै बिरोधहरु पनि भए । लगानीकर्ताहरु बीच नै प्यान सम्बन्धि दुइ धारका धारणाहरु बाहिरिएका थिए ।